Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena , aoka izy hangataka amin’ Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an’ ny olona rehetra sady tsy mandatsa; ary dia homena azy izany. Jak.1:5
Tsy ho diso fanantenana ireo zay mangataka satria maniry ny hanome ny hafa. Hamaly soa ireo izay manatona azy amin'ny finoana feno hafanam-po Andriamanitra. Nanome toky antsika Izy, fa tsy tokony hitazona antsika ao anatin'ny tahotra ny fisainana mikasika ny voninahiny sy ny fiandrianany.
Hanao mihoatra lavitra noho izay heverintsika Izy, raha toa ka manatona eo an-tongony, ilay toerana feno famindrampo, isika.
Asongadiny ny fiaindrianany amin'ny alalan'ny fanehoany ny fahatsarany lehibe sy feno famindrampo, ka manome izay angatahina aminy Izy. Manome toky ny tenany fa hihaino ny vavaka ataontsika, amin'ny alalan'ny filazany fa hihaino, izany.
Amin'ny alalan'ny fironana voajanahary ao amin'ny ray amandreny ho mora fanahy amin'ny zanany, ka hatramin'ny fiantrana tsy misy fetran'Ilay nanangana antsika tamin'ny famoronana sy ny fanavotana, no hisarihany antsika. Hoy izy: "Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an'izay mangataka aminy?" - Lio. 11:13. Tsy misy fotoana, izay mahavery maina ny fitalahoana atoan'ireo mahantra sy ireo fanahy noana...
Raha jerena izay voalaza teo, lazao ahy hoe izy no tokony haneho, tarehy mamiratra sy faly kokoa, tarehy feno masoandro kokoa noho izay miaina amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra? Ao aminy no ahitan'ireo mahantra sy noana izay ilainy rehetra.
Aoka anefa tsy hohadinointsika fa izay notahin'Andriamanitra tamin'ny zava-tsoa amin'izao fiainana izao, dia tokony ho tànan'Andriamanitra, hanampy sy hanome izay ilain'ireo mahantra ireo. Tokony hiara-miasa Aminy izy ireo. Mpitantana nametrahany fitokisana izy ireo, ary tokony hampiasa ny fananany ho fampandrosona ny asany, mba hankalazana ny anarany.
Irin'ny Tompo ny hampiasa ny fiangonana tahaka ny fantsona hanolorany ny fahatsarany. Raha toa ka avelan'ny vahoakany hisokatra izany fantsona izany, ka handray ireo fanomezam-pahasoavana ara-panahy sy ara-nofo, ary hizara izany amin'ireo mahantra, dia tsy hisy na dia marary iray aza hatao an-tsirambina, tsy hisy na dia kamboty iray aza hitomany sakafo. Hihira noho ny fifaliana, ny fon'ny mpitondra tena sy ny tsy manan-dray.
Nanome ny harem-pahasoavana lehibe indrindra ho an'ny olombelona Andriamanitra. Nataony izany mba hahafahan'ny olombelona hizara ny hatsarany.